किन हुन्छ सपनामा से’क्स ? यस्ता छन् कारण — Sanchar Kendra
किन हुन्छ सपनामा से’क्स ? यस्ता छन् कारण
निदाएपछि सपना हरेक मानिसले देख्छन् । केही व्यक्तिहरु सपनालाई आफ्नो अवचेतन मनको इच्छाहरुसँग जोड्छन् भने कसैले यसलाई जिन्दगीको कामनाको रुपमा अथ्र्याउँछन् । यहाँ चाहिँ हामी गर्दैछौं से’क्ससम्वन्धी सपनाका कुरा ।
यस्ता वयस्क मानिसहरु कमै होलान्, जसले सपनामा से’क्स गरेको देख्दैनन् । यस्तोमा कोही चरमोत्कर्ष अगाडि नै निद्राबाट ब्यूँझन्छन् भने कोही स्वप्नदोषको शिकार हुन्छन् । ब्यूँझेपछि उनीहरु खिन्न बन्छन् । यहाँ हामी सपनामा से’क्स गरेको देख्नुको अर्थका बारेमा बिस्तारमा बताउँदैछौं ।
सपनामा से’क्सको अर्थ
कैयन सपनाहरुले व्यक्तिलाई अत्यन्त मिठो अनुभूति गराउँछन् । त्यसमा एउटा हो, से’क्सको सपना । विशेषज्ञको भनाई अनुसार जब कुनै व्यक्तिले वास्तविक जिवनमा से’क्सको आनन्द लिन वा से’क्ससँग सम्वन्धित भावना उजागर गर्न सक्दैनन्, त्यतिबेला यस्तो सपना देखिन्छ । यस्तो सपनामा तपाईं आफूलाई कुनै अपरिचितका साथ, अफिसकै सहकर्मीसँग, सार्वजनिक स्थानमा वा आफ्नो पूर्वप्रेमिकासँग सेक्स गरिहेको पाउनुहुन्छ ।
यस्तो सपनाले तपाईंको कामेच्छाको स्थितिको बारेमा संकेत गर्छ । तपाईंको मस्तिष्कले तपाईंलाई यो बताउने कोशिश गरिरहेको हुन्छ कि से’क्ससम्वन्धी तपाईंका शारीरिक आवश्यकताहरु पूर्ति भइरहेका छैनन् । यस्तो प्रकारको सपना देखेपछि मनलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नुस ।
परिचित व्यक्तिसँग से’क्स
धेरै युवा-युवतीहरुको सपनामा आफ्नो विपरितलिंगी बोससँग से’क्स गरिरहेका हुन्छन् । यसको मतलब तपाईं आफ्नो बोससँग साँच्चिकै शारीरिक सम्वन्ध राख्न चाहनुहुन्छ भन्ने होइन । फेरि यस्तो सपना देखियो भन्दैमा बोससँग दुरी बढाउनेतिर लाग्नु पनि हुँदैन । यस्तो सपना त्यतिबेला देखिन्छ, जब तपाईं बोसलाई आफ्नो प्रेरणास्रोत मान्नुहुन्छ ।
सार्वजनिक स्थानमा से’क्स
एकैपटक धेरै व्यक्तिसँग से’क्स
सम्भोग गर्नु अघि के चाहन्छन् महिला ?